Yoo diinni gochaa fi tankaarfii kee jibbe daandii sirrii irra jiraachuu kee hubadhu - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Yoo diinni gochaa fi tankaarfii kee jibbe daandii sirrii irra jiraachuu kee...
Yoo diinni gochaa fi tankaarfii kee jibbe daandii sirrii irra jiraachuu kee hubadhu
Tokkummaan Oromoo gaara taankii fi xayyaarri diinaa diiguu hin dandeenne.
Sa’aa kanatti Woyyaanee fi kittillayyoonni isii akka diina isaanii laakkofsa tokkoffaatti ilaalaa kan jiran garee Lammaa Magarsaatii. Worra fagoo irra worri isaan keessaa hojjatu akka isaan galaafatu, bollatti akka isaan gatu dur yeroo Mallas lubbuun jiruu eegalanii beekan ture. Kana hanbisuuf tooftaa addaddaan OPDO gaadi’aa turaniiru. Woggaa 26 qaamaa fi sammuu OPDO xaxanis, boodarra garuu OPDO’n qaawwala uumametti fayyadamtee mana hidhaatii miliqxe. Gareen Lammaa dirree irra jira amma. Kun Oromoo hundaaf gammachuudha. Woyyaaneef kuni oduu gaddaa fi booyichaati.
Mataa olqabachuun OPDO kan mataa lafa laalchise Woyyaanee qofa miti. Habashoonni (leellistoota Itoophiyaa Haylasillaasee) mardoo taa’aa jiran. Rakkoon isaanii eebjuun isaan yoo Woyyaaneen lafa dhoofte Oromoo dursanii aangoo qabachuu garee Lammaatiin nu jalaa jaame hubannoo jedhu irra gayuu isaanii fakakata. Kanaaf, ija Habashootaa biratti, Lammaan jibbamaa fi shakkamaa guddaa ta’ee kan as baye. Kan nama ajaa’ibu sa’aa kanatti gareen kuni Woyyaanee woggaa 26’f salphisaa ture dalgatti dhiisee Lammaa abaaruu irratti bobba’uu isaati. Yaadadhaa, Woyyaaneen ammas hin kufne. Garuu, maaliif yeroo kanatti kan Oromoo hin taane hundi Lammaa Magarsaa akka sodaa guddaatti kan fudhataniif? Kun waan biraatiif miti; gareen Lammaa Magarsaa aantummaa Oromoo qabaachuu isaa alagaan waan mirkaneeffateef.
Abdii Ilee irraa hanga Habashoota Washington D.C itti maandheffataniitti hundi gare Lammaa jalaa miila fuudhuudhaaf sa’aa 24 hojjataa, boolla qotaa jiran. Boolla sanitti kan awwaalamu Lammaa fi Abiyyi osoo hin taane Dabratsiyoonii fi Abbaay Tsahaayyee akka ta’uuf deemu ammatti ifa ta’aa dhufeera.
Akkuma yeroo addaddaatti ibsamaa ture, gareen Lammaa fi Abbaay Xahaayyee kokkee wolqabataniiru. Abbaay Xahaayyee humna qawweetti erkata. Lammaan ummaataan dhaadata. Ummanni yoomuu ni moo’ata. Yeroo kanatti korma keessaa mooraa alagaa booratu, leenca kokkee diinaa qabatu argachuun Oromoof hiree guddaadha. Hanga yeroo dhiyootti kun ni ta’a jedhee kan eebjate hedduu miti. Amma imimmaan Oromoo waaqni arge, booyicha isaas dhagaye fakkaata. Diinni nuuf rafee bulaa hin jiru. Nutis isaaniiif rafuu hin qabnu. Osoo wolshakkinu, bitaa-mirga jennu hireen tuni qubbiin keessaan nu harkaa akka hin baane.
Yeroo kanatti diina keenna kan mar’umaa bobeesse, mataa dhukkubsee fi hirriba kan dhabsiise sagalee qawwee osoo hin taane sagalee Qeerroo magaalotaa fi badiyaa Oromoo keessaa bookkisaniiti. Kanaaf ammatti kan barbaachisu humna qawwee osoo hin taane irree fi sagalee tokkummaati. Keessaa fi alaan sabni kuni tokkummaa isaa cimsannaan taankfii fi xayyaarri Woyyaaneen woggaa 26’f wolitti qabde Oromoo jilbiiffachiisuu hin danda’u. Irree tokkummaan Lammaa fi garee isaa cinaa haa dhabannuu akka hawwii Woyyaanee jaamsinu.
Previous articleQabeenyi biyyattii qisaasamaa jira; Pirojeektiin Shukkaaraa Xaanaa Balas kasaaraa qarshii biliyoona 8.4 qaqqabsiise
Next articleDabratsiyoon Agaaziin dhaadata, Abdii Illeen Liyyuu Poolisii abdata; Oromoon tokkummaa isaa gaachena godhata